Ọnwụ nke Stephanie Mailer, nlọghachi nke Joël Dicker | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ọnwụ nke Stephanie Mailer
John Ortiz | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Black akwụkwọ
Ọnwụ nke Stephanie Mailer.
Amalitere na 2018, Ọnwụ nke Stephanie Mailer Ọ bụ akwụkwọ pụtara ìhè nke onye edemede bụ Joël Dicker. Nwa okorobịa onye Switzerland na-ede akwụkwọ egosipụtakwala ụdị nke ya nke ọma, na-achọpụta ya naanị site na ịgụ paragraf ole na ole. Na ọrụ dị ka ma ọ bụ karịa na-akpali akpali karịa Eziokwu banyere ikpe Harry Quebert, nke, mgbe ọ nwesịrị ihe ịga nke ọma enwetara, bụ nnukwu nsogbu.
Ya mere, Ọnwụ nke Stephanie Mailer na-anọchite anya nkwenye nke Dicker dị ka onye edemede a kacha mara amara Francophone nke akwụkwọ akụkọ ndị nchọpụta nke narị afọ iri ọhụrụ. Ọ bụ ụdị akụkọ dị adị kemgbe Sophocles na Oedipus Rex ya. Agbanyeghi na ezi "boom" ya bidoro n'etiti narị afọ nke iri na itoolu n'aka Edgar Allan Poe na, emesia, Agatha Christie.
1 Banyere onye edemede, Joël Dicker
1.1 Lastbọchị Ikpeazụ nke Ndị Nne na Nna Anyị na Eziokwu Banyere Okwu Harry Quebert
2 Ọnwụ nke Stephanie Mailer, na nkenke
2.1 Ọsọ megide oge
2.2 Ọtụtụ ihe nzuzo, tupu na mgbe (ma ọ bụ ugbu a)
3.1 Ọrụ dị ebube?
3.2 Ma ọ bụ obere ọrụ?
3.3 Ọnọdụ nke naanị (ụtọ) ntụrụndụ
Banyere onye edemede, Joël Dicker
Amụrụ na Geneva na June 16, 1985, Joël Dicker Ọ bụ nwa onye na-agụ akwụkwọ na onye nkụzi French. Nke a - ya na ibi na ngalaba French na-asụ French na Switzerland - kwadoro ọnọdụ ya maka "asụsụ nke ịhụnanya." Approachzọ o si ede ede sitere na agụụ ya maka ụmụ anụmanụ.
Na afọ 10 ọ tọrọ ntọala Gazette des Animaux (Anụmanụ anụmanụ); ọ duziri ya ruo afọ asaa. Mgbe e mesịrị, ọ banyere n'asọmpi nwere obere akụkọ akpọrọ El Tigre. Dị ka ndị ọkàikpe asọmpi ahụ si kwuo, ọ gaghị ekwe omume onye naanị ya dị afọ iri na itoolu dere ederede dị otú ahụ e depụtara nke ọma. N'ikpeazụ, ederede banyere feline ahụ ka amatara ya na International Prize for Young Francophone Authors.
Oge ikpe-azụ nke nna anyị ha y Eziokwu banyere ikpe Harry Quebert
Na 2009, o mechara ihe odide nke akwụkwọ akụkọ mbụ ya, Oge ikpe-azụ nke nna anyị ha. Otu akụkọ nledo, nke ya na 2010, meriri Prix de Écrivains Genevois (Geneva Writers Prize). Aha ahụ mechara gaa ahịa na 2012. Ná ngwụsị nke otu afọ ahụ, "mmiri mmiri" nke ọrụ Dicker incipient e bipụtara: Eziokwu nke ikpe Harry Quebert.
A sụgharịrị n'asụsụ 33, nke mbụ na ahịa dị iche iche. Mbido mbụ nke onye nyocha Genevan na-akọ akụkọ wetara ikuku ọhụrụ na atụmatụ aghụghọ nke ụmụ mgbei nke ihe ijuanya ogologo oge. Ọzọkwa, ọ bụ ntinye nke onye nyocha ọhụụ n'ime ndepụta aha aha dịka Sherlock Holmes ma ọ bụ Auguste Dupin, Marcus Goldman.
Ọnwụ nke Stephanie Mailer, na nkenke
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
Mpụ abụọ a na-edozighị, afọ 20 dịpụrụ iche, na otu cop iji kpochapụ ihe niile: Jesse Rosenberg. Ọ bụ onye uwe ojii mara amara nke New York kemgbe 1994, mgbe - dị ka onye ọhụụ - ya na onye otu ya Derek Scott doziri mpụ dị egwu na The Hamptons, Long Island.
Mgbe ị na-achọ ịla ezumike nká, Stephanie Hailer, bụ onye nta akụkọ na-ekwu okwu, gwara ya ka ọ kwuo na agbapụtaghị ikpe mbụ ya. Echere, ọ gaara eme ọtụtụ mmejọ nke mere ka ọ mechie faịlụ ahụ na - enweghị onye kpatara (ezigbo) ahụ. Agbanyeghị na okwu ndị a agbasaghị onye na-achọpụta ihe ochie, otu olu n'ime ya na-elo ya.
Ọsọ megide oge
N'ikpeazụ, Rosenberg gbanwere obi ya, kpebie inyocha. Ma ozugbo o mere mkpebi ahụ, onye na-ebo ya ebubo - onye na-azọrọ na ya nwere ihe akaebe banyere onye mere n'ezie - ga-apụ n'anya na-ahapụghị akara ọ bụla. Mgbe ahụ agbụrụ megide oge ga-amalite.
Onye uwe ojii ga-edozirịrị ilu abụọ tupu ewepụ asambodo ya. N'ihi nke a, usoro akụkọ ahụ na - aga n'ihu n'etiti 1994 na 2014. Rosenberg chọrọ ịla ezumike nká na akọ na uche ya n'udo. Gbapụta onwe gi, n’agbanyeghi ihe obula ... o gha egbuola.
Ọtụtụ ihe nzuzo, tupu na mgbe (ma ọ bụ ugbu a)
Otu njirimara a na-apụghị ịkọwa akọwa nke akwụkwọ akụkọ mpụ Dicker bụ ihe odide ha: ha niile maara ụfọdụ ozi dị mkpa. Nkọwapụta nke onye isi akụkọ a na ndị mmadụ amaghị. En Ọnwụ nke Stephanie Mailer minutiae na ndeputa ndi ozo bu akuku nke oge abuo na ọtụtụ ihe jikọrọ karịa anya.
Egwuregwu ahụ na-agba ọsọ nke Rosenberg chere ihu bụ otu ụzọ ahụ achọrọ maka ndị na-agụ ya iji ruo na njedebe nke ihe omimi niile. Na peeji nke ikpeazụ, n'ụzọ nkịtị. Dị ka onye uwe ojii ahụ na-enweghị atụ, "ndị akaebe" nke nkata a ga-akpachara anya ka ha ghara ịghagharị aha, ụbọchị na ebe. Ma ọ bụghị ya, ọ gaghị ekwe omume idozi nsogbu niile ịkọwa ihe omimi.
Ọrụ dị ebube?
Ihe ịga nke ọma rụpụtara site na Eziokwu banyere ikpe Harry Quebert emetụtala, nke ọma na nke ka njọ, nzaghachi ọha na eze na Ọnwụ nke Stephanie Mailer. N’otu aka, ndị mbipụta akwụkwọ ahụ nwere afọ ojuju dị ukwuu n’ihi na, n’iburu ihe ndị anyị kwurula n’elu, akwụkwọ a ghọrọ ahịa ngwa ngwa. Ọbụna tupu mbipụta ya, ọnụọgụ ndị ahụ adịworị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ma ọ bụ obere ọrụ?
Mana nzaghachi sitere na akụkụ dị mma nke ọha na eze mechara bụrụ ihe na-adịghị mma. Ndị Fans Dicker ghọtara àgwà nke onye edemede nwere ike ịdị ize ndụ ma nwee obi ụtọ nha anya. Otú ọ dị, n'ime "fandom" n'onwe ya enwere ọtụtụ olu nke ndakpọ olileanya, nke, were akụkọ banyere nwayọ nwayọ, dịkwa okirikiri.
N'agbanyeghị na echiche nke afọ ojuju ndị na-agụ ya Ọnwụ nke Stephanie MailerObere ihe nhụjuanya ahụ bụ maka ndị chọtara onye edemede na-asụ French na akwụkwọ akụkọ a. Otú ọ dị, enweghi otutu okwu nkocha ma obu obi uto nke akwukwo a na akwukwo.
Quote nke Joël Dicker.
Ọnọdụ nke naanị (ụtọ) ntụrụndụ
Nke a bụ nsogbu nke na-echegbu ndị edemede na ndị na-agụ ya. Ajụjụ bụ, onwere ihe dị njọ na nnọkọ? Kwesịrị ileda ndị ode akwụkwọ na-enye naanị ndị na-ege ha ntị egwuregwu? Ọ bụ isiokwu na-enweghị otu mmeghachi omume ebe ọnọdụ niile ziri ezi. Agbanyeghị, n'ime nka n'ozuzu ya, ịnabata ndị na-ege ntị esiri ike karịa ka ị chere.
"Nsogbu" bụ na ngosipụta ihe ngosi dị oke mma. "Naanị ihe ọchị ahụ", site n'oge Oedipus Rex, ọ dị ka okwu enweghị ntụkwasị obi, nke ndị na-achị ọchị. Mana ọtụtụ ndị edemede ma ọ bụ ndị na-ese ihe ga-achọ ịnwe ikike ahụ. Dịkwa ka ọ dị na Dicker, ire ọtụtụ nde n'ime usoro ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Black akwụkwọ » Ọnwụ nke Stephanie Mailer
Raymond Chandler nwere ubochi omumu. Nhọrọ nke ahịrịokwu na mpekere
Ihe mara mma nke Hedgehog